မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်Ltd.Â
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ။
Q:သငျသညျထုတ်ကုန်သောသူတို့အား website တွင်ပြသကြသည်မဟုတ်ထောက်ပံ့နိုင်ပါသလား?
A:ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုပေးပို့ကျနော်တို့you.Âအထောက်အကူပြုဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည် ကျေးဇူးပြု.
A:မှန်ပါသည်, ဆိပ်ကမ်းNingboÂဆိပ်ကမ်းကိုorÂShanghaiÂဆိပ်ကမ်းကို ISA နှင့်လေဆိပ် Ningbo Lishe, ဟန်ကျိုး Xiaoshan သို့မဟုတ်ShanghaiÂPudongÂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာAirport.Â ISA
Q:သင့်ရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?
A:ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်မားစွဲစေ, fittings, Pex ပိုက်နဲ့ hardware tools များပေးနိုင်ပါသည်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများထုတ်ကုန်တင်ပို့ကျော်5နှစ်အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်!